'चरीला कमाई दोङला नाई' गाउँदै उद्घाटन गरियो 'तामाङ मौलिक ह्वाइला न्हान' [भिडियो] काठमाडौं । तामाङ मौलिक गीतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले 'नेपाल तामाङ मौलिक ह्वाइला न्हान' संस्था स्थापना भएको छ । शनिवार नेपाल तामाङ घेदुङको सभाहलमा वाग्मती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङले उक्त संस्थाको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
राज्यको उपेक्षाले तामाङ समुदायका भाषा, संस्कार र संस्कृतिमा एकरुपता पाउन सकेन : उपसभामुख तामाङ काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङले राज्यको संरक्षण नपाएको कारणले तामाङ समुदायको भाषा, संस्कार र संस्कृतिमा एकरुपता हुन नसकेको बताउनुभएको छ । नेपाल तामाङ मौलिक ह्वाइला न्हान (मौलिक गीतको चौतारी) संस्थाको उद्घाटन कार्यक्रममा शनिबार उपसभामुख तामाङले आफ्नो समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृति हरेक क्षेत्रमा फरक-फरक हुनुको पछाडिको कारण राज्यको उपेक्षा रहेको बताउनुभएको हो ।
सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा भाषिक संघसंस्थालाई समावेश नगरिएको प्रति जनजाति महासंघको आपत्ति काठमाडौं । भाषा आयोगले ११ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सिफारिश गर्दा मातृभाषी संघसंस्थालाई समावेश नगराएको प्रति नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ संघीय परिषद् सचिवालयले भर्त्सना गरेको छ । भाषा आयोगले २१ भदौमा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरुको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिशहरु (पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन) २०७८ सम्बन्धमा आधिकारिक भाषिक संघसंस्थासंग छलफल र परामर्श नगरेको भन्दै महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै भर्त्सना गरेको हो ।
मातृभाषीलाई विज्ञ तामाङको अनुरोध- जनगणनामा 'मातृभाषा' लेखौं र लेखाऔं काठमाडौं । भाषाविद्‍ अमृत योञ्‍जन तामाङले जनगणनामा जाने पनि नजाने पनि मातृभाषा लेख्‍न अनुरोध गर्नुभएको छ । बुधबार सुरु पहिलो चरणको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सन्दर्भमा मातृभाषीहरूलाई अनुरोध जारी गर्दै भाषाविद्‍ योञ्‍जनले मातृभाषा बोल्न जाने पनि नजाने पनि 'मातृभाषा'को महलमा आफ्नो भाषा लेख्‍न अपील गर्नुभएको हो ।
विद्यालयमा मातृभाषा बोल्न नपाउने निर्देशनप्रति विद्यार्थी घेदुङको भर्त्सना, भाषामाथि आँच पुर्‍याउनेलाई कारवाहीको माग सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको एक विद्यालयका प्रधानध्यापकले विद्यालय परिसरभित्र कुनै पनि मातृभाषा बोल्न नपाउने निर्देशन दिएको प्रति नेपाल तामाङ विद्यार्थी घेदुङले भर्त्सना गरेको छ ।
तामाङ भाषाबारे आयोगको विश्लेषण अपर्याप्त, सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस हुनु ठूलो उपलब्धि : भाषाविद् योन्जन भाषविद् अमृत योन्जन तामाङले तामाङ भाषाबारे भाषा आयोगले पर्याप्त र यथार्थपरक सूचना संकलन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । भाषा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे धाराणा राख्दै भाषाविद् योन्जनले ‘भाषा विकासका लागि आवश्यक र आयोग आफैंले निर्धारण गरेको कतिपय सूचकलाई वेवास्ता गरेको’ प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै भाषाविद् योन्जनले यसबारे सच्याउन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले प्रतिवेदनको सारंशको आधारमा यो प्रतिक्रिया दिएको भन्दै पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुँदासम्म प्रष्ट भएर आउने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कांग्रेसमा समावेशी कोटा सुनिश्चित गर्न मुस्लिम संघको माग उदयपुर । नेपाल मुस्लिम संघ उदयपुरले नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा समावेशी कोटा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
कांग्रेसका क्यान्सरपीडित वडा सदस्यलाई अमेरिकाबाट ६ लाख ६४ हजार सहयोग काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका क्यान्सरपीडित वडा सदस्य निरज सत्याललाई अमेरिकाबाट ६ लाख ६४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्राप्त भएको छ ।
प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषाका लागि ११ भाषा सिफारिस, वाग्मतीमा तामाङ र नेपालभाषा काठमाडौं । भाषा आयोगले प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषाका लागि ११ भाषालाई सिफारिस गरेको छ । २०६८ सालको जनगणनाको आधारमा आयोगले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । विज्ञ समूहले गरेको सिफारिसका आधारमा भाषा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समेत स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने पनि आयोगले औंल्याएको छ ।
आज कुसे औंसी, बुबाको मुख हेर्ने दिन काठमाडौं । भाद्रकृष्ण औंसीका दिनमा मनाइने कुसेऔंसी पर्व आज मंगलबार मनाइँदैछ । आज घरघरमा कुस पनि भित्र्याइँदैछ । सनातन वैदिक हिन्दु धर्मावलम्बी वर्षभरि घरघरमा गरिने देवकार्य एवम् पितृकार्यका लागि कुस आजै घरमा राखेर पूजा गर्छन् ।
संखुवासभा हत्या प्रकरण : अनुसन्धानका लागि धरानबाट तालिमप्राप्त कुकुर पठाईदै मादी नगरपालिका १, खोलागाउँका एकै परिवारका ६ जनाको हत्या घटना अनुसन्धान गर्न धरानबाट तालिमप्राप्त कुकुरसहितको प्रहरी टोली संखुवासभा आउने भएको छ । हत्या भएको घटनास्थल मादी १ मा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवडाको टोली मात्रै पुगेको छ ।
संखुवासभामा एकै परिवारका ६ जनाको हत्या संखुवासभाको मादी नगरपालिका १ स्थित खोलागाउँमा एकै परिवारका ६ जनाको ज्यान लिनेगरी भएको हत्याकाण्डमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ । प्रहरीका अनुसार घरमा सँगै सुतेका ७ जनामध्ये ६ जना मृत फेला परेका छन् । ८९ वर्षीय बौद्धमान कार्कीमात्रै जीवित भेटिनु भएको छ । मृत फेला परेका सबै शव फरक फरक स्थानमा भेटिएको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय रानीले जनाएको छ ।
लोकबहादुर गुरुङको स्मृतिमा सञ्चारकर्मी, लोकगायिका शान्ति गुरुङ सम्मानित वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी स्वर्गीय लोकबहादुर गुरुङको सातौ स्मृति दिवसको अवसरमा वरिष्ठ सञ्चारकर्मी एवम् लोकगायिक शान्ति गुरुङ सम्मानित हुनुभएको छ । पोखरामा शनिबार लोकबहादुर स्मृति प्रतिष्ठानद्धारा आयोजित आयोजित स्मृति दिवसमा रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारणकी उपप्रमुख एवम् वरिष्ठ सम्पादक, तमु संचारकर्मी संघ कास्कीकी अध्यक्ष, वरिष्ठ लोक गायिका गुरुङलाई ३५ हजार नगदसहित सम्मानपत्र, दोसल्लासहित सम्मानित हुनुभएको हो ।
वाग्मती समाचार : दोलखाका ६ जना पत्रकार पुरस्कृत दोलखा । नेपाल पत्रकार महासँघ दोलखा शाखाले दोलखाका ६ जना क्रियाशिल पत्रकारलाई बिभिन्न पुरस्कारवाट पुरस्कृत गरिएको छ । बुधवार ‘१६ औं देवदास स्मृतिसभा तथा पत्रकारिता पुरस्कार’ वितरण कार्यक्रम द्धारा पुरस्कार वितरण गरिएको हो । स्वं. देवदास स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारवाट सन्तोषी कार्की (१० हजार), इन्द्रमणी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारवाट सिर्जनकुमार घिमिरे (१० हजार), विकास पत्रकारिता पुरस्कारवाट गोकर्ण भण्डारी (१० हजार), स्व. पशुपति चौंलागाई स्मृति गणतान्त्रिक पत्रकारिता पुरस्कारवाट दिपक बस्नेत (५ हजार) नगद सहित पुरस्कृत हुनु भएको छ ।
मिस एण्ड मिसेज इन्डिजिनियस २०२१ (सिजन–२) को ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रम प्रारम्भ काठमाडौं । मिस एण्ड मिसेज इन्डिजिनियस २०२१ (सिजन–२) ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रम काठमाडौंमा प्रारम्भ भएको छ । एस.के. इन्टरटेन्मेनको आयोजनामा भएको अन्तिम प्रतियोगिताको शनिवार वाग्मती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
महामारीमा सोवारिग्पा उपचार डोल्मा शेर्पा सिन्धुपाल्चोक । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परम्परादेखि नै अभ्यास गर्दै आएको सोवारिग्पा उपचार पद्धति कारोना महामारीकालमा पनि प्रयोगमा आएको छ । परम्परागत विधिबाट गरिने उपचार पद्धति समयअनुसार सुधार हुँदै आएको छ ।
छैटौं तामाङ ज्ञान महोत्सव सम्पन्‍न काठमाडौं । तीन दिने छैटौं तामाङ ज्ञान महोत्सव सम्पन्न भएको छ । महोत्सवको तेस्रो तथा अन्तिम दिन मंगलबार दुई फरक र अन्त्यन्तै महत्वपूर्ण विषयमा प्यानल डिस्कसन भएको थियो । दुई सत्रमा विभाजन गरी गरिएको छलफलको पहिलो सत्रमा ‘नेपालका विश्वविद्यालयमा तामाङ अध्ययनको सम्भावना र चुनौती’ विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
छैठौं ‘तामाङ ज्ञान महोत्सव’ भदौ ६–८ गतेसम्म काठमाडौं । छैठौं ‘तामाङ ज्ञान महोत्सव’ भदौ ६–८ गतेसम्म भर्च्युअल माध्यमबाट हुने भएको छ । तामाङ न्हाङखोर र तामाङ डाजाङको संयुक्त आयोजनमा तीन दिने ज्ञान महोत्सव हुने भएको हो ।
कोभिडमा आदिवासीका असल अभ्यास रोजिना लामा, काभ्रेलाञ्चोक । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण जनजीवन प्रभावित भईरहँदा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले भने यस्ता महामारी विरुद्ध आफनो आदिवासीय प्रथा, परम्परा र ज्ञानको प्रयोग गरेर महामारी बिरुद्ध जुध्ने अभ्यासलाई पुनस्थापना गरेका छन् ।
२१औं तामाङ प्रसारण दिवस–मातृभाषा पत्रकारिता कमजोर बन्दै गएकोप्रति सरोकारवालाको चिन्ता काठमाडौं । मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमहरूको अवस्था कमजोर बन्दै गएकोप्रति सरोकारवालाले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । यस्ता सञ्चारमाध्यम र मातृभाषा पत्रकारिताको प्रवर्द्धनमा राज्यबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसकेको उहाँहरूको गुनासो छ । तामाङ पत्रकार संघले २१औं तामाङ प्रसारण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले यस्तो गुणासो राख्नुभएको हो ।
माइतीघरमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको धर्ना काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले धर्ना दिएको छ । कैलालीको टीकापुर घटनाभएको छ वर्षको अवसर पारेर मंगलबार मोर्चाले धर्ना दिएको हो । धर्नाकारीहरुले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रेशम चौधरीलगायत टीकापुर जनविद्रोहका राजबन्दीहरुको रिहाईको माग गरेका छन् ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका माग समाधानका लागि वार्ता समिति गठन जनजाति संस्थाहरुको माग काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र गोर्खा भर्ती हुँदै आएका समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको मुद्दालाई समाधानका लागि वार्ता समिति गठन गर्नु र नेपाल सरकारबाट तत्काल कूटनीतिक रूपले संवाद सुरू गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली आदिवासी पत्रकार मञ्‍च गठन न्युयोर्क । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली आदिवासी पत्रकार मञ्च (फिनिज) गठन भएको छ । विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर सोमबार अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ज्याक्सन हाइटमा भएको आदिवासी जनजाति पत्रकारको भेलाले संस्थाको घोषणा गरेको हो । भेलाले फोनिजका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मोहन सिंह लामाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।
आदिवासी जनजाती महासंघको अन्तरक्रिया : 'नीति निर्माण तहमा विस्तारै पहुँच पुगेको छ, तर पर्याप्त छैन' काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले आदिवासी जनजातीको पहुँच सबै क्षेत्रमा बिस्तार हुँदै गएको बताउनुभएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मंगलबार नेता पुनले आदिवासी जनजातीको पहुँच सबै क्षेत्रमा बिस्तारै बिस्तारै बिस्तार हुँदै गएको बताउनुभएको हो ।
साउन २७ मा फोनिजको २२ औं स्थापना दिवस, ८ पत्रकारलाई पुरस्कार दिइने नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले आठ जना पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । फोनिजको २२औँ स्थापना दिवस तथा विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा साउन २७ गतेका दिन पत्रकारहरुलाई पुरस्कार दिने निर्णय भएको फोनिजले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
आदिवासी जनजाति दुरा युवा र महिलालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तीन दिने तालिम लमजुङ । दुरा समुदायका युवा तथा महिलाहरुलाई आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) ले आयोजना गरेको तीन दिने जलवायु परिवर्तन तथा अधिकारमुखी तालिम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । जलवायु परिवर्तन, आदिवासी जनजातिको दीगो स्वनिर्धारित विकास तथा नीतिगत पैरवीसम्बन्धी तालिम दुरा सेवा समाजको संयोजनमा आयोजना गरिएको हो ।
सञ्‍चारकर्मी तामाङ पुरस्कृत नुवाकोट । सञ्‍चारकर्मी शक्तिमाया तामाङ पुरस्कृत हुनुभएको छ । नुवाकोट जागरण साप्ताहिकको वार्षिकोत्सव र उत्तरगया दैनिकको चौथो वार्षिक उत्सवको अवसरमा तामाङलाई शुक्रबार कृष्णमाया लिलानाथ स्मृति पत्रकारीता पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।
फेशन डिजाइनर काउन्सिल अफ नेपालको सल्लाहकारमा कोरियोग्राफर अश्विनी झा नियुक्त काठमाडौ। फेशन डिजाइनर काउन्सिल अफ नेपालले आफ्नो सल्लाहकारमा कोरियोग्राफर अश्विनी कान्त झालाई नियुक्त गरेको छ। छैठौँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा फेशन डिजाइनर काउन्सिल अफ नेपालका अध्यक्ष अमित झाले शनिबार आयोजित एक समारोहमा अश्विनी झालाई नियुक्ति पत्र प्रदान गर्नुभयो ।
नुवाकोटमा चार किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्न जुर्मुराए गाउँले स्थानीय सडक निर्माणमा जुटेका छन् । भ्याङ्ले कमेरेगाउँ सडकखण्डअन्तर्गत भ्याङ्ले-बालकुमारी मन्दिरसम्मको ४ किलोमिटर बाटो ग्राभेलका लागि गाउँलेहरु जुर्मुराएका हुन् । बाटो मर्मत तथा ग्राभेलका लागि स्थानीय जीतबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा साउन २ गते ९ सदस्यीय बालकुमारी टोलसुधार समिति बनाइएको छ ।